तपाईँको बच्चाले हातगोडा दुख्यो भन्छ ? कारण यस्तो हुनसक्छ - Janaswasthya Khabar
You Are Here Home आर्टिकल तपाईँको बच्चाले हातगोडा दुख्यो भन्छ ? कारण यस्तो हुनसक्छ
जनस्वाथ्य खबर - July 7, 2021 at 21:13	0
बच्चा उमेरअनुसार बढ्न क्याल्सियम अपरिहार्य छ । क्याल्सियम कम हुन नदिन खानपानमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । हरेक दिन सामान्य मालिस गर्दा पनि बच्चाको दुखाइमा धेरै राहत मिल्छ । कतिपय बच्चामा जोर्नी दुखाइका कारण बाथरोग पनि हुनसक्छ । कतिपय बालबालिकामा बाथको समस्या भने पछि गएर आफैँ ठीक हुन्छ । तर, कतिपयको भने पछिसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताउँछन् डा. गुरुङ ।